Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien), hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 5 ka hatramin’ny 11 Novambra 2019 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2019 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Liva Andriamanantena
Sary natolotr'i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien 洪簡廷卉)
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien) (@JocelynJinumuTW ) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Vehivavy teratany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kasavakan ao amin'ny Vahoaka Pinuyumayan any Taiwan aho. Izaho no mpandrindra sy mpanorina ny Vondron'asan'ny Tanora Indizeny Taiwan LIMA  amin'izao fotoana izao, sady mpanao gazety no mpikaroka mahaleo tena, ary manohy ny fianarana Ph.D amin'ny fandalinana ny serasera ihany koa. Mpiaro ny zon'ny teratany mavitrika amin'ny ambaratonga rehetra aho.
Mpiara-Mitantana ny Fivoriamben'ny Tanora Indizeny Manerantany aho, izay vondrona ofisialy nahazo fankatoavana avy amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zaikabe Maharitra momba ny Raharahan'ny Vahoaka Indizeny nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2015. Nanorina ny Vondron'asan'ny Tanora Indizeny Taiwan LIMA aho tamin'ny taona 2013 niaraka tamin'ny vina hampifandray ny tanora indizeny manerana ny sisintany sy ny kontinanta, mba hizarana fomba fijery sy traikefa, mba handraisana anjara amin'ny tolona amin'ny zon'izy ireo ary hananganana ny fahafahan'izy ireo hiantsoroka ny andraikiny amin'ny fanohizana ny lova ara-kolontsainany sy ny fiarovana ho an'ny fitoviana sy ny rariny.
Nosokajian'ny UNESCO ho fiteny tandindonin-doza ny fiteny Pinuyumayan . Olona vitsivitsy izay efa 50 taona mahery ihany no mahay miteny sy mampiasa ilay fiteny amin'ny andavanandro, raha vitsy kosa ny tanora no mahay miteny izany fiteny izany.
Indrisy anefa anisan'ireo tsy mahay miteny ilay fiteninay aho. Na dia misy aza ny paikady sy ny programa mba hanamorana ny fiarovana ilay fiteny dia tsy nahavita namerina ilay fiteny ho an'ny fiainana andavanandron'ny olona ny ezaka natao fa nanao ny fiteny ho lohahevitra hianarana fotsiny ihany ka tsy nampiasa izany mba ho fitaovana hampitana ny fahalalana ny fomban-drazana. Noho izany, mahalana no ahitana izany anatiny sy ivelan'ny Aterineto.
Na dia mandalo toe-java-tsarotra aza ny fiteny Pinuyumayan, ny kolontsaina Pinuyumayan kosa dia velona indray sy niroborobo nanomboka tato anatin'ny roapolo taona. Nisy ny ezaka samihafa nataon'ireo olona mba hamerenana indray ny fiteny amin'ny fiainana andavan'andro. Te-hizara ny ezaka nataon'ireo olona aho, anisan'izany ny hira, ny hira nentim-paharazana sy ny hiram-pivavahana.
Zava-dehibe ny mahita ireo tenindrazanay manokana ho toy ny fiteny ampiasaina ao an-trano isan-andro, any an-tsekoly ary any am-piasana, midika izany fa fiteny tokony hiainana isan'andro ireo fitenin'ny indizeny fa tsy natao hotahirizina amin'ny firaketana sy an-tsoratra fotsiny ihany. Mahita fahitana aho fa tsy hianatra ny fiteny Pinuyumayan any am-pianarana intsony fa ny fiteny Pinuyumayan no fiteny ampiasaina amin'ny fampianarana ny taranja rehetra ary hiainana amin'ny tontolo ahitana ny olona miresaka momba ny toetrandro, hiady varotra momba ny vidin'ny legioma ary hifamaly amin'ny fiteny Pinuyumayan mihitsy eny amin'ny toeram-piantsonana aza izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/07/144538/